Manao Diabe Manohitra Ny Herisetra I Meksika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Aogositra 2017 18:53 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Français, Português, বাংলা, Español, 繁體中文, 简体中文, 日本語, English
(Marihina fa tamin'ny 2 Septambra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Leo ny herisetra sy ny tsy fandriampahalemana tsy mitsaha-mitombo izay atrehin'ny firenen'izy ireo tamin'ny herintaona ireo Meksikana, araka ny voalaza tao anatin'ity lahatsoratra tao amin'ny Global Voices teo aloha ity, ary nanapa-kevitra ny hanao diabe mangina miaraka amin'ny hiram-pirenena sy ny labozia mirehitra manerana ny firenena sy any amin'ny toerana hafa tahaka an'i Kosta Rika, Etazonia, Espaina, Isiraely, Polonina ary Angletera mandritra ny alahady 31 aogositra 2008. Manome ny antsipiriany momba ny mpanohana ny diabe sy ny anton'izany ny tranonkala Lets Illuminate Mexico (Andao Hanazava An'i Meksika) ary tsy ho ela dia hisy ihany koa ny lahatsary sy ny sary.
Nanoratra tao amin'ny bilaoginy momba ny zavatra hitany tamin'ity hetsika diabe ity i MaJaDeRiA , bilaogera Kolombiana monina any Meksika, izay nahitany ny hantsana eo amin'ny saranga ara-tsosialy. Nitarika ireo sarangan'olona ambony, saingy nijanona teo amin'ny toerana fiaingana, teo amin'ny sarivongan'ny Anjelin'ny Fahaleovantena, ny sarangan'olona antonony sy ambany, izay antsoin'ny sasany hoe “ireo sarangan'olona mpandeha amin'ny metro” dia nihaona teo amin'ny Zocalo. Nofaranany tamin'ny fanontaniana vitsivitsy ho an'ireo olom-pirenena Meksikana izany :
- Nahoana no tsy nisy ny teny iraisana teo amin'ny teny filamatra? Ao anatin'ny fitakiana fandriampahalemana sy ny fangatahana fa ireo tsy manao ny asany hiala ary hitaky ny fiafaran'ny fakàna an-keriny … inona marina moa izany no tena angatahan'izy ireo?
– Tsy azoko mihitsy hoe nahoana ny diabe no tsy manohitra ny herisetra, fa manohitra ny tsy fahombiazan'ny manampahefana. Tsy mandeha ve ny zavatra iray raha tsy misy ny iray hafa? Tsy tokony hanao diabe manohitra ny herisetra ve isika ary hitaky ny fanesorana ny iraka omena ny manampahefana ho any an-kafa?
– Iza no olon-dratsy eto? Ireo jiolahy sa ny manampahefana, sa iza?
-Nahoana no mankany amin'ny Zocalo fa tsy any Pinos (na ny tranon'ny filoha)?
Hita ao amin'ny Blip.tv ny lahatsariny Marcha DF etsy ambany. Mivaky toy izao ny fanazavana amin'ny teny Espaniola : Tsy fantatro raha natao handrisika ny varotra tsy ara-dalàna ihany ny diabe. Saingy tsy maintsy fantatro fa olona MAROBE no tao amin'ny Diabe tao D.F.. Tena nahafinaritra ny mahita azy ireo nanao diabe.
Namoaka ny lahatsarin'ny diabe nahitana ny fihirana ny hiram-pirenena miaraka amin'ny labozia mirehitra tao an-tanàndehibe Meksikana Monterrey i yazpeace:
Pikantsary: sarin'ny labozia avy amin'ny skyseeker.
14 ora izayKiobà